पूर्वमा रातो सलाम कुमार पौडेललाई – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७७, २२ फागुन शनिबार १२:०२ March 6, 2021 1739 Views
नेपालको जनप्रतिरोध आन्दोलनमा पूर्वक्षेत्रको वीरता बलिदानमा अधिक थियो । झापाली विद्रोहदेखि बेथानको वीरतासम्म कूलयोग हेर्दा, जनयुद्वपूर्वको अवधिमा पश्चिम नेपालभन्दा पूर्वी नेपालतिर प्रतिरोध आन्दोलन निकै उचाइमा पुगेको इतिहासको तथ्य साक्षी छ । मोहनचन्द्र अधिकारीको जनताको बहुदलीय जनवाद अस्वीकारको कथा र यानप्रसाद गौतम आलोकको समाधीसम्मको व्यथामा नियत र नियतिका जोडघटाउ र गुणनभाग सबै गरेर गहिरो घोत्लिन जरुरी छ, यो सत्यको गहिराइ नाप्न । तर यो आलेख कुमार पौडेल हत्या सन्दर्भ केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छु ।
सर्लाहीमा उनीसँग मिलाएको दर्विलो हात र बिदाइको क्षण उनको र मेरो जीवनको अन्तिम बन्यो । आज समयले पनि निकै राजनीतिक जीवनको धुमिल तस्बिर आँखासामु ल्याएको छ । जब मैले सर्लाही र सागरनाथको सुकुमबासी किसानबस्तीमा पाइलो टेकेर केही तथ्य नियाल्न पुगेँ, हाम्रो मौसमी आन्दोलन र उपयोगितावादी संस्कारको सिकार भएको चिनियाँ हुनान विद्रोहजस्तो किसान विद्रोहलाई पैँतालाले कुल्चेर निदाएको लम्पट क्रान्तिकारी रोमान्सको यो किसान आन्दोलनको चित्र । त्यो भ्रूण हत्या गरिएका क्रान्तिको किल्ला थबाङको उर्वर गर्भाशय पनि हो । त्यसपछि नै हो, मेरो मन र आस्थाले चिनेको कुमार पौडेलको पहिचानलाई सत्यरूपमा देखेको । उनी भूमिहीन गरिब किसानहरूको एक अद्भूत आस्था, भरोसा र न्यायको खम्बा रहेछन् । भ्रष्ट जालीझेलीहरूको दिमागमा घुमिरहेको एक जब्बर भूत क्रान्ति वा विप्लव बनेर ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मुक्ति सेनाको कमान्डर रामप्रसाद राईको नेतृत्वमा भएको सिंहदरबार विद्रोह दमनले समाप्त भयो । टिमुरबोटे ओढारमा तुहिएको विद्रोहको गर्भ र क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको विद्रोही सपनाहरू उजेल्ने प्रयास अरुणपूर्वतिर जारी थियो । पञ्चायतको बर्बरता र अत्याचारले अरुणमा बगेको आँसु रगतको कथाहरूले मान्छेको मन मनमा उद्वेलना पैदा गरेको थियो । गीतकार गणेश इजमको शब्द र किशोर थुलुङको स्वरमा रहेको गीत अझै उस्तै सान्दर्भिक छ :
खोकु छिन्ताङ दुख्यो कि अरुण सुसाउँदा
जनमुखी सहकर्मी रूपचन्द्र बिस्टको शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने पञ्चायतका अर्धमण्डले सूर्यबहादुर थापाको योजनामा खोकु छिन्ताङमा पञ्चसरकारले जनताको रगत पिएको थियो । त्यो पञ्चायती बर्बरताको बज्रप्रहार धनकुटाको खोकु, छिन्ताङ गाउँमा मात्र होइन, सुखानीको जंगलमा समेत परेको थियो । रामनाथ दाहाल, वीरेन राजबंशी, नेत्र घिमिरे, नेत्र कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठलगायतका योद्धाहरूको हत्या गरेको थियो । रामवृक्ष यादव, दिलिप चौधरी, ऋषि देवकोटा आजादको हत्या हुँदै कुमार पौडेलसम्मको शृृंखलालाई एउटै मालामा उनेर हेर्ने हो भने दमन र प्रतिरोधको शृङ्खला पूर्वमा वर्तमानसम्म जारी छ । सहिद रामवृक्ष यादवको शब्दमा हामी भन्न सक्छौँ, तपाईंं मान्नुस् या नमान्नुस् पूर्वमा एकदिन रातो झन्डा फहराउनेछ :
आप माने वा नमाने
पेरुमे लाल झन्डा फहराए
पञ्चायती वामपन्थी राजनीतिमा पूर्वमा माले, एमाले र पश्चिमतिर मशालको प्रभाव बढी देखिन्थ्यो । झापा विद्रोहका नायक जबज अस्वीकार गरेर हिँडेका मोहनचन्द्र अधिकारी गेरुवस्त्र धारण गरेर रामनाम जप्दै छन् । समकालीन राजनीतिका योद्धा आरके र सिपी मैनालीहरू एकएक खाल थापेर राजनीतिकै मैदानमा छन् । यतिबेलाका सत्तानायक केपी ओलीको सत्तारोहणको वर्तमान सत्ता र विगतको विरासतमा आकाश–पातालको अन्तर छ । झापाली धर्मप्रसाद ढकालको घाँटी रेटेर आउने ओली ज्यामिरगढीमा कर्णबहादुर गौतमको रगतको सिर्काले झस्किएर संसदवादको पुच्छर समात्न पुगेका थिए । आज उनको सत्ताको खुनी अनुहारमा कुमार पौडेलको रगका छिर्काहरू प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ ।
भोजपुरका तीर्थ राईदेखि सलार्हीका कुमार पौडेल हुँदै नीरकुमारसम्मको रगत पिउन उद्यत किन भएको होला यो सत्ता ? जब मान्छेमा आफ्नै विगतको बलिदानप्रति हीनताबोध र लघुताभास पैदा हुन्छ नि, त्यसपछि हो ऊ पतनको बाटोमा पुग्ने । अरुणझैँ उर्लिएको रगतको भेल तरेर आउनेहरू वीरताका कथा बोकेर आउनेहरूको राजगद्धी सधैँ सधैँ भुइँमान्छेको रगत पिउन किन उद्यत हुन्छ होला ? बडो विचित्रको राजनीतिक दृष्य नेपालमा देखिन्छ । कुमार पौडेलको हत्यापछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र भूपू गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ बिच संसदीय समितिमा भएको जुहारी दुनियाँलाई भुलभुलैयाको तमासा केवल सावित भयो । आखिर सत्तामा जो भए पनि हुने उही रहेछ, यो त सत्ताको वर्गचरित्र हो । उनै जनार्दन गृहमन्त्री हुँदा पनि माइला लामा जेल परेको दृष्टान्त छ । तथापि नेपाली काँग्रेस संसदमा अवरोधसम्म गर्न पुग्यो । काँग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जालमै उल्लेख गरेका थिए, राज्यले व्यक्ति हत्या गर्नु लोकतन्त्रको उपहास हो ।
विराटनगरमा रहेको भारतीय कन्सुलर कार्यालय जुन तराईमा भारतीय घुसपैठ र चलखेल अखडा थियो । त्यहीँमाथिको आक्रमणले सबै राजनीतिक दलले त्यो कार्यालय हटाउन जरुरी छ भन्दै बोल्नैपर्ने अवस्था आयो । हुन त गौर नरसंहार र माओवादी कार्यकर्ताको कत्लेआमको घटनालाई नियाल्ने हो भने त्यो माओवादी आन्दोलन कमजोर गर्ने नियोजित–प्रायोजित मधेस आन्दोलनको डमी थियो । पूर्वी–तराईमा कोशी उच्चबाँध र अरुण तेस्रोमाथिको भारतीय गिद्धेदृष्टि रहँदै आएको छ । काँग्रेसले अघि सारेको त्यो सवाल एमालेले रोकेको थियो । यो कुरा २०५० सालको हो । काँग्रेसले अघि सारेको त्यो सम्झौता असफल पारेको एमालेले २०५४ मा महाकाली सन्धि पारित गरेको थियो । उबेलादेखि योबेलासम्म केपी ओली एमालेका हर्ताकर्ता पात्र थिए । २०५१ सालमा एमालेले रद्द गरेको सप्तकोशी उच्च बाँध सम्झौता अहिले अरुणदेखि कोशीसम्मको गंगाजले मोदीको पाउ पखाल्न व्यस्त छ, तिनै ओली नेतृत्वको सरकार ।
सागरनाथको सुकुमबासी बस्तीमा आश र उत्साहको केन्द्र थिए कुमार । जब खेतबारी जोत्ने बेला सुरु हुन्थ्यो, सुकुमबासी किसानको गाउँ युद्ध मैदानजस्तो देखिन्थ्यो । रातभर ट्याक्टरले बारी जोत्ने र युवाहरूले घरेलु हतियारसहित पहरा दिने । यस्तो दृश्य खेतीबालीको मौसममा हररात देखिइरहन्थ्यो ।
राजधानीका सडक किनारामा फूल रोपेर समृद्धि फुलाउने समाजवादको गँजेडी गफ दिने जनतालाई गोली हान्न आदेश दिँदै सत्तामा उपरखुट्टी लाउने केपी–बादल मण्डलीभन्दा रुख मासेर देश र जनता बचाउने दूरदर्शी अभियानमा थिए कुमार । त्यसैले त गरिबहरूको आशाको दियो बनेका थिए कुमार । उनको हत्यापछि जुलुसमा छाती पिटेर रुँदै गरेकी एक वृद्ध महिलाको भीडीयो सामाजिक सञ्जालमा निक्कै भाइरल भएको थियो । त्यो भाइरल भावना हो, आस्था हो, चुनौती हो, केपी ओलीको सत्ताका लागि जनताको वास्तविक नायक सर्वहाराहरूको नेताको मायामा पोखिएको प्रेमपूर्ण पागलपनको अलाप ।
मेरो बाल मनोविज्ञानमा अमीट छाप बोकेर बसेको थियो एउटा जनवादी गीत । मनु लामाको शब्द र माइला लामाको संगीतमा रहेको सो गीत अझै पनि मन मस्तिष्कमा गुञ्जिइरहन्छ :
पूर्वमा रातो सलाम दिलमाया लामालाई
पश्चिममा रातो सलाम लली रोक्कालाई
आज समय र सन्दर्भले गीतको भावना र मनको उद्वेलनालाई एकै उभारमा ल्याउन थालेपछि मैले फेरि अन्तरहृदयदेखि रातो सलाम गर्न चाहेँ कमरेड कुमार पौडेललाई !
आज माइला लामा पूर्व–संखुवासभातिर जेलमा छन् । हामी पनि खुल्ला जेलमै छौँ जस्तो लाग्छ । फरक यति हो, उनी बन्द पर्खालभित्र छन्, हामी खुल्ला दुनियाँमा बन्धक छौँ । यस्तै उस्तै छ हिजोआजका कथाहरू । लेखक साहित्यकार अनिल शर्मा ‘विरही’ ले यो जनक्रान्तिको यात्रामा पूर्वी–नेपालको पाखा–पखेरातिर चाहर्दै कोरेका गीतका शब्दहरूमा वर्तमानको उत्पीडनका चित्रहरू झल्किन्छन् । हेरौँ, एक अंश :
तमोर उर्लियो लै लै अरुण उर्लियो
वीरहरूको नशा नशामा रगत उर्लियो
सिसमहल मागेको होइन
ओत लाग्ने बास देऊ
मौजा हामीले कहाँ माग्या छौँ र ?
ओत लाग्ने ठाउँ देऊ ।
सुकुमबासीहरूको ओत लाग्ने झुपडी निमार्णको अभियानमा थिए कुमार । एमालेबाट राजीतिमा पाइलो चालेका उनी विद्रोही चेतना बोक्ने एक सच्चा देशभक्त र क्रान्तिकारी नेता थिए । उनको राजनीति र हत्यासम्मको नियतिको तथ्य नाप्न चुरेभावर राजनीतिक दलको उदय र अवसानको कथासम्म उतार्नुपर्ने हुन्छ । विसर्जित चुरेभावरको राजनीतिक अवसानमा कुमार पौडेलको विभत्स हत्या र बाबु थापाको जेलयात्राको योगफल नाप्ने हो भने भारतीय लगानीमा पूर्वी–तराईमा रोपिएको पहाडे र मधेसीबिचको विद्वेषपूर्ण साम्प्रदायिक विभेदको चित्र प्रष्ट हुन आउँछ । कुमारको हत्याले धेरै तथ्यहरूको संकेत गरेको छ ।
कुमार हत्याको प्रतिवेदन दिँदै मानव अधिकार आयोग वा उसम्बद्ध निकाय भन्छ, यो गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना हो । कुमारका परिवार भन्छन्, यो योजनाबद्ध नियोजित हत्या हो । तर, मलाई लाग्छ यो हत्या राजनीतिक अपराध हो । उत्पीडित, श्रमिक जनता अधिकार सम्पन्न नहुँदासम्म राजनीतिक आन्दोलन उठ्न जरुरी हुन्छ । तपाईंंले नबोले मैले र मैले नबोले तपाईंंले वा तपाईंं र म कोही नबोले कोही न कोही त बोल्नै जरुरी थियो । यो अन्याय, अत्याचार, विभेद र धोकाधडीको विरुद्ध कसै न कसैले विद्रोहको झन्डा उठाउन जरुरी थियो । कवि नाजिम हिक्मतको कवितांसहित उज्यालोको खोजी गर्दै पूर्वमा रातो सलाम कुमार पौडेललाई !
हामी कोही जलेनौँ भने
२०७७, ८ असोज बिहीबार १२:१६